ElaseShayina Imfashini entsha 3 koku-1 ifektri nabakhiqizi be-cigarette capsulet pusher | Dayang
Kulula futhi kuyashesha ukuyisebenzisa, futhi igcwele umuzwa wekhwalithi. Imibala ehlukahlukene ingakhethwa. Ukuze ugcwalise ubuhlalu, udinga kuphela ukufaka esikhundleni sikamagazini ogcina ubuhlalu. Ingabe ufuna ukuba umfana ogqamile phakathi kwababhemayo? I-Dispenser applicator ikusiza ukuthi ube ngumbhemi noma intokazi esemfashinini.
Beka umagazini ogcina ubuhlalu obuqhumayo kumagazini. Lo magazini ungakwazi ukwengeza ubuhlalu obuqhumayo obuyi-100 bukagwayi. Umbala nelebula Lelogo nakho kungenziwa ngendlela oyifisayo. Idivayisi yokuphula udonga inentwasahlobo eyakhelwe ngaphakathi ukuze ibuyele endaweni yokuqala ngemva kokucindezela. Iphinde ilungele izitayela ezahlukene zikagwayi ongu-2.8mm no-3.3mm.
Ubuhlalu bethu be-pop buphephe kakhulu futhi buqukethe i-gelatin, ama-glycerides, amakha, namakhemikhali angenayo i-silicon. Kuphephe ngokuphelele ukusebenzisa ngaphandle kokukhathazeka nganoma yiziphi izinkinga zokuphepha.
Uma ungumuntu othanda ukunambitheka okuqinile kanye nomshisekeli wokubhema, khona-ke i-Cigarette Pop Pearl iyisinqumo sakho esingcono kakhulu! Ngenxa yokuthi usikilidi uqhuma ubuhlalu, wonke ugwayi ovuthayo usuyinto eyingqayizivele etholakele.
Ifanele ugwayi ojwayelekile. Uchofoza futhi ujabulele ingqikithi yephunga lakho eliyintandokazi kusukela ekuqaleni kuya ekugcineni.
Igama Lomkhiqizo Isisetshenziswa se-Dispenser
Usayizi(Plus amaphakheji angaphandle) 8.5cm*3.5cm*2.5cm.
Ukusebenza kahle Sebenzisa izindlela ezisetshenziswa kancane ukuze ucindezele ubuhlalu obuphumayo kugwayi.
Okubalulekile Ipulasitiki ye-ABS.
Iphakheji Eyodwa ebhokisini.
Amasampula Sinikeza isevisi yesampula.
I-Dispenser applicator njengomkhiqizo wokuqala owethulwe ngu-Da yang ngemva kokungena emshinini we-pod, ukuzalwa kwawo kuwuguquko. Lokho okulethayo kwababhemayo akukona nje kuphela ukusetshenziswa okulula futhi okusheshayo, kuze kube yinkulumo yangemuva kwesidlo sakusihlwa kuwo wonke umuntu. Qhathanisa nenye imibala yakho icace kakhulu noma imibala yami ipholile kakhulu. Isisetshenziswa se-Dispenser sizoba umkhiqizo wakho owuthandayo!
Okwedlule: Ibhokisi lokugcina likagwayi wemfashini entsha ye-capsule burst pusher storage
Olandelayo: Intengo Engcono Kakhulu yeMenthol Balls Cigarette Capsule Pen Applicator
I-Cigarette Capsule Aplicator
Umshini we-Cigarette Capsule
I-Cigarette Capsule Pusher